सरकार गठनको तयारीमा तालिवान- विश्व - कान्तिपुर समाचार
सरकार गठनको तयारीमा तालिवान
विमानस्थलमा देश छाड्न चाहनेको भीड, युद्ध सकिएको तालिवानको घोषणाप, रूस र चीनले काबुलस्थित दूतावास बन्द नगर्ने
भाद्र १, २०७८ बुद्धिसागर मरासिनी
काठमाडौँ — अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको विद्रोही समूह तालिवानले सरकार गठनको तयारी गरेको छ । तालिवान प्रवक्ता मोहम्मद नइमले अफगानिस्तानमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी थालिएको बताएका हुन् ।
तालिवान लडाकुहरूले आइतबार राजधानी काबुलीस्थित राष्ट्रपति भवनसहित महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय नियन्त्रणमा लिएका थिए । देशका अधिकांश क्षेत्रमा पकड जनाएपछि उनीहरू राजधानी काबुल प्रवेश गरेका थिए ।
अफगान राष्ट्रपति असरफ घानी तथा अन्य केही वरिष्ठ अधिकारीहरू देश छोडेर भागेपछि तालिवानलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न वार्ता गरिएको थियो । सन् २००१ मा अमेरिकी सेनाले आक्रमण गरेपछि सत्ताच्युत भएको तालिवान दुई दशकपछि सत्तामा फर्केको हो ।
दोस्रोपटक सत्तामा पुगेपछि भने तालिवानले आफूलाई उदार देखाउने प्रयास गरिरहेको छ । उसले लुटपाट नगर्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, नागरिकहरूविरुद्ध कुनै कारबाही नगर्न तथा अफगानिस्तान छाड्न चाहनेलाई नरोक्न आफ्ना लडाकुहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
प्रवक्ता नइमले ‘अफगानिस्तानमा युद्ध सकिएको’ जनाएका छन् । अलजजिरा टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै उनले ‘तालिवान विश्व परिवेशबाट अलग रहेर बस्न नसक्ने र अफगानिस्तानको शासन प्रणाली र त्यसको स्वरूपबारे छिट्टै जानकारी गराइने’ बताए । उनका अनुसार कन्दाहारस्थित विमानस्थल पूर्णरूपमा तालिवानले नियन्त्रणमा लिएको छ । तालिवान लडाकुहरूले तीन दिनदेखि घेराबन्दी गरेर राखेका हजारौं सुरक्षाकर्मीले आत्मसमर्पण त्यहाँको संघर्ष सकिएको नइमले जनाए । कन्दाहार अफगानिस्तानको दोस्रो ठूलो सहर हो ।
नइमले कुनै कूटनीतिक नियोग तथा कार्यालयहरू आफूहरूको निसानामा नरहेका र विदेशी तथा अफगान नागरिकाको सुरक्षाप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।
‘हामी अफगान जनता, उनीहरूको सम्पत्ति र जीवन सुरक्षित हुने तथा कसैसँग पनि कुनै किसिमको प्रतिशोध लिइने छैन भनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छौं,’ उनले भनेका छन् । तर धेरैजसो अफगानीहरू सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको शासनकालमा जस्तो तालिवानहरू निर्दयी हुन्छन् कि भनेर डराइरहेका देखिन्छन् ।
काबुलको स्थिति के छ ?
तालिवानले नियन्त्रणमा लिएसँगै अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा त्रास बढेको छ । सडकहरूमा तालिवान लडाकुहरूको संख्या निकै देखिन्छ । कतिपय लडाकुहरूले राजधानी काबुलका स्थानीयबाट हतियारहरू संकलन गरिरहेका अलजजिराले जनाएको छ । अफगानिस्तानबाट बाहिरिने प्रयासका लागि सयौं मानिसहरू विमानस्थलमा जम्मा भएका छन् । तीमध्ये केहीले दुई दशक पुरानो तालिवानी शासन सम्झेर आफूहरू त्रसित भएको बताएका छन् ।
६० भन्दा बढी देशले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै देश छाड्न चाहने मानिसलाई नरोक्न तालिवानसँग आग्रह गरेका छन् । अमेरिकाले आफ्नो दूतावासका कर्मचारी तथा नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने कार्य भइरहेको जनाएको छ । काबुलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका केही कर्मचारी तथा नागरिकलाई आफ्ना सैनिकहरूले सुरक्षा दिइरहेका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘पछिल्लो समय विमानस्थल वास्तविक संकटको क्षेत्र भएको छ,’ अलजजिराले आफ्ना संवाददातालाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ । विमानस्थलमा भीड अनियन्त्रित भएपछि सोमबार बिहान अमेरिकी सेनाले हवाई फायर गरेको जनाइएको छ । त्यस क्रममा कम्तीमा ६ जनाको ज्यान गएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।
समाचार संस्था रोयटर्सले मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको जनाउँदै तीमध्ये केहीको भीडमा किचिएर ज्यान गएको जनाएको छ । अमेरिकी अधिकारीले दौडिएर विमान चढ्न खोज्नेहरूलाई रोक्न सैनिकहरू गोली चलाउन बाध्य भएको दाबी गरे । अमेरिकी र उसका साझेदार मुलुकहरूले काबुलबाट आफ्ना कर्मचारी फकाइरहेका भए पनि चीन र रुसले दूतावास बन्द नगर्ने जनाएका छन् ।
कसको नेतृत्वमा बन्ला सरकार ?
राष्ट्रपति असरफ घानीको बहिर्गमनसँगै तालिवानले नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको जनाए पनि कुन नेताले नेतृत्व लिन्छन् भन्नेबारे केही बताइएको छैन ।
तालिवानको वर्तमान संगठन र संरचनाका आधारमा हैबतुल्लाह अखुन्दजादा र मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरमध्ये एकले सरकारको नेतृत्व लिने आंकलन गरिएको छ । हैबतुल्लाह तालिवान समूहका सर्वोच्च नेता हुन् । उनलाई तालिवानको राजनीतिक, धार्मिक तथा सैन्य मामिलासँग सम्बन्धित सबै विषयमा निर्णय लिने अधिकार छ ।
सन् २०१६ मा अफगान–पाकिस्तान सीमाक्षेत्रमा अमेरिकी सेनाले गेको ड्रोन आक्रमणमा तालिवान प्रमुख अख्तर मन्सुर मारिएपछि अखुन्दजादाले समूहको नेतृत्व सम्हालेका हुन् । मन्सुरले आफ्नो इच्छापत्रमा हिबतुल्लाहलाई उत्तराधिकारी घोषित गरेका थिए ।
तालिवानभित्र ‘विश्वासयोग्य नेता’ का रूपमा परिचित अखुन्दजादाले पाकिस्तानको कुचलक सहरको मस्जिदमा डेढ दशकसम्म पढाएका थिए । सन् २०१६ को मेदेखि भने उनी त्यहाँबाट एकाएक सम्पर्कविहीन भएका थिए । उनी हाल करिब ६० वर्षका भएको जनाइएको छ ।
उनले नै तालिवानलाई संगठित पार्दै बलियो अवस्थामा ल्याएका ठानिन्छ । मुल्लाह अब्दुल घानी बरादर तालिवानको सहसंस्थापक हुन् । हाल तालिवानको राजनीतिक प्रमुख रहेका बरादर सन् २००१ मा अमेरिकी सेनाले तालिवानलाई सत्ताच्युत गरेपछि विदेशी सैन्य फौजविरुद्धको विद्रोहका प्रमुख नाइके बनेका थिए ।
सन् २०१० मा अमेरिका र पाकिस्तानी सेनाको संयुक्त कारबाहीका बेला उनी कराँची सहरबाट पक्राउ परेका थिए । अफगानिस्तान सरकारले वार्ता प्रस्ताव गर्दा सर्तस्वरूप केही बन्दी मुक्त गर्नुपर्ने तालिवानको सूचीमा उनको नाम शीर्षस्थानमा हुने गर्थ्यो । पाकिस्तान सरकारद्वारा उनी सन् २०१३ मा रिहा भएका हुन् ।
तालिवानले अमेरिकासँग वार्ताका लागि सन् २०१८ मा कतारमा कार्यालय खुलेपछि उनी राजनीतिक प्रमुख बनेका हुन् । सन् १९६८ मा जन्मेका बरादरले सन् १९८० को दशकमा मुजाहिद्दिनका तर्फबाट सोभियत संघविरुद्ध लडेका थिए ।
त्यस्तै, सैन्य मामिला हेर्ने उपप्रमुख मुल्लाह मोहम्मद याकुब हुन् । पूर्वतालिवान प्रमुख तथा संस्थापक नेता मुल्लाह ओमारका छोरा याबुकले तालिवान समूहका सम्पूर्ण सैन्य गतिविधि तथा आक्रमणको निरीक्षण तथा व्यवस्थापन गर्छन् । याकुबलाई पटकपटक सर्वोच्च नेताको रूपमा प्रस्ताव गरिए पनि उनले अखुन्जादालाई अघि सार्ने गरेका छन् ।
तालिवानको हक्कानी नेटवर्कको नेतृत्व गर्ने सिराजुद्दिन हक्कानी अर्का प्रभावशाली नेता हुन् । उनी मुज्जाहद्दिन कमान्डर जालालुद्दिन हक्कानीका छोरा हुन् । हक्कानी समूहले अफगान–पाकिस्तान सीमामा तालिवानको वित्तीय तथा सैन्य सम्पत्तिको निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । हक्कानी समूह अफगानस्तामा हुने विभिन्न ठूला आत्मघाती बम विस्फोटका घटनामा संलग्न हुने गरेको बताइएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र १, २०७८ ०८:००
श्रावण ३२, २०७८ बुद्धिसागर मरासिनी
एजेन्सीको सहयोगमा — दुई दशकको संघर्षपछि अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवान पुनः सत्तामा पुगेको छ । पछिल्लो साता सरकारी फौजविरुद्धको आक्रमण तीव्र पार्दै तालिवानले शासनसत्ता हातमा लिएको हो । तालिवानले काबुलस्थित राष्ट्रपति भवन आइतबार राति नियन्त्रणमा लिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
देशका ३४ मध्ये कम्तीमा २६ वटा प्रान्त कब्जा गरेको तालिवानले राजधानी काबुल घेरेपछि गृहमन्त्रीले शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको जनाएका थिए । तर, त्यसलगत्तै राष्ट्रपति असरफ घानी देश छाडेर भागे । उनी ताजिकिस्तानतर्फ उडेको जनाइएको छ । एक उच्च अधिकारीले राष्ट्रपतिले देश छाडेको पुष्टि गरे पनि थप जानकारी दिन अस्वीकार गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७८ ०६:५१